Sep 08, 2020018332HARARE, Zimbabwe - An environmental group in Zimbabwe has applied to the countrys High Court to stop a Chinese firm from mining coal in Hwange National Park, which hosts one.
Sep 09, 2020018332Source Zimbabwe Group Tries to Stop Chinese Coal Mine in Game Park The New York Times HARARE, Zimbabwe An environmental group in Zimbabwe has applied to the countrys High Court to stop a Chinese firm from mining coal in Hwange National Park, which hosts one of Africas largest populations of elephants.
Zimbabwe China Throws Toys Out Of Iea Clean Coal Centre
Sep 22, 2020018332Zimbabwe last week banned two Chinese companies Zhongxin Coal Mining Group and Afrochine Smelting it had previously licensed for coal exploration at the Hwange national park after campaigners and environmentalists took the government to.
Sep 09, 2020018332The Zimbabwe Environmental Lawyers Association argues that the creation of a coal mine in the park by the Zimbabwe Zhongxin Mining Group Tongmao Coal Company Pvt Ltd would cause quotdevastating .
Sep 13, 2020018332Zimbabwe has banned all mining for coal in its national parks, performing an about-face on an earlier decision to allow China to look for fossil fuels in the area.
Sep 09, 2020018332Zimbabwes government on Tuesday banned all mining in national parks, one day after environmental rights lawyers went to court to bar a Chinese firm from exploring for coal in the countrys .
HARARE, Zimbabwe AP An environmental group in Zimbabwe has applied to the countrys High Court to stop a Chinese firm from mining coal in Hwange National Park, which hosts one of Africas largest populations of elephants.
Sep 03, 2020018332Zimbabwe is risking the environment and wildlife in its biggest game park after the government, already battling to explain the deaths of 22 elephants, granted coal mining.
Mining coal would be a disaster for the many animals found in Hwange National Park and a disaster for Zimbabwes tourism industry.
Zimbabwe last week banned two Chinese companies Zhongxin Coal Mining Group and Afrochine Smelting it had previously licensed for coal exploration at the Hwange national park after campaigners and environmentalists took the government to court to avoid ecological degradation in parks.
Sep 08, 2020018332Zimbabwe, constantly plagued by power shortages, is heavily reliant on coal and hydropower for electricity. Chinese firms have been involved in multi-billion dollar projects to boost coal-fired power plants. Several Chinese firms also mine gold, diamonds and other minerals in Zimbabwe.
quotThe other concession SG5756 granted to the Zimbabwe Zhongxin Coal Mining Group has also contracted SustiGlobal to do an EIA again with an undated.
Mar 22, 2020018332Zimbabwe Zinghxon Coking Company, Appex Mining, Glotech Engineering, Clidder Mining, Discovery Investments, Coal Brick and Mackrock and Sable Mining also hold mining licences in Hwange National Park, Gwayi and Lower Dete Valley game reserves.
An environmental group in Zimbabwe has applied to the countrys High Court Tuesday Sept.